निशुल्क मास्क चाहियो ? आफ्नो जुन्ता दि फ्रेक्जिया जानुस्। - VOICE OF NEPAL
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १६:३८
239 ??? ???????
तपाई पोर्चुगलमा बस्नुहुन्छ र निशुल्क मास्क चाहियो ? आफ्नो नजिकको जुन्ता दि फ्रेक्जिया ( नागरिक वडा कार्यालय ) जानुस्।
पोर्चुगलमा अधिकांस जुन्ता दि फ्रेक्जियाले निशुल्क मास्क वितरण गरिरहेका छन्। निशुल्क मास्क पाउन तपाईले आफ्नो रेसिडेन्सी कार्ड साथमा लगेर आफु बस्ने जुन्ता दि फ्रेक्जिया कार्यालयमा जानुपर्नेछ। मास्कको लागि आएको भन्नुस, ” निशुल्क मास्क पाउनुहुनेछ। ” मास्क सकिएपछि फेरी जानुस जुन्ता दि फ्रेक्जिया, फेरी निशुल्क मास्क लिन सक्नुहुन्छ।
निशुल्क मास्क पाउन दुई सामान्य नियम छन्। पहिलो कुरा के भने तपाईको रेसिडेन्सी सम्बन्धित जुन्ता दि फ्रेक्जियाकै हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा काम र अन्य कारणले बसाई सराइ गर्नुपर्ने भएकोले हामी आफ्नो रेसिडेन्सी कार्डमा भएको ठेगाना भन्दा फरक स्थानमा बसेका हुन्छौ। विभिन्न सरकारी सेवा कामका लागि हामीले जुन्ता दि फ्रेक्जियावाट आफु बस्ने ठेगाना प्रमाणित गराएका हुन्छौ। यही ठेगाना प्रमाणित गराएको कागजपत्र लगेर पनि निशुल्क मास्क प्राप्त गर्न सकिन्छ।
जुन्ता दि फ्रेक्जियाले प्रदान गरेको मास्क भित्र जानकारी पनि दिईएको छ। उदाहरणको लागि जुन्ता दि फ्रेक्जिया अरॆइरोले प्रदान गरेको निशुल्क मास्क प्याकेट भित्र १० वटा मास्क राखिएको छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भएको एक लिफलेट पनि राखिएको छ।
पोर्चुगलमा कोरोना भाइरस संक्रमणको शुरुवातिका समय मार्च महिनातिर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु मास्क, पन्जा, पीपीइ आदिको अभाव थियो। पोर्चुगलले दुई पटक चाटर्ड बिमानद्वारा चीनबाट यी सामाग्रीहरु झिकाएको थियो। पोर्चुगलले चीनबाट तेश्रो पटक खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री नआएपछि पोर्चुगलले आफै मास्क उत्पादन शुरु गरेको थियो।
कोरोना माहामारीका शुरुवातीका दिनमा मास्क आयात गर्ने पोर्चुगलले अहिले दैनिक १० लाख बढी सर्जिकल मास्क उत्पादन गर्दै आएको छ। मास्क आयात गर्ने पोर्चुगलले हाल युरोपभरी निर्यात गर्दैछ।
दुःखद खबर: लिस्बनबाट जुन १७ देखि हराएका १९ बर्षीय सिद्धान्त मृत भेटिए !
पोर्चुगलमा पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
पोर्चुगल र स्पेनबिचको बन्द नाका नाका जुलाई १ देखि खुल्ने
लिस्बनमा कोरोना संक्रमितहरु लगातार बढेपछि रोकथामका लागि प्रधानमन्त्री कोस्ताद्वारा कडा नियम लागु : व्यवसाय बेलुकी ८ बजे नै बन्द गर्नुपर्ने, १० जना बढी भेला हुन नपाउने
पोर्चुगलमा १७ बर्षीय एक नेपाली युवा ४ दिनदेखि सम्पर्कविहिन, खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह।
कोरोना संक्रमणबाट पोर्चुगलमा पहिलो चिकित्सकको मृत्यु
लिस्बनको सडकमै १५ बर्षे युवाको शरीरको ८ ठाउँमा छुरा रोपियो !